Mowjadaha qabow ma xiriir la leeyihiin isbeddelka cimilada? | Saadaasha Shabakadda
Waxay u egtahay in waqtigan aad ka shakisan tahay in isbeddelka cimilada uu si dhab ah u dhacayo iyo in kale, taas oo ilaa xad caqli gal ah tan iyo markii barafku ka dhacay Spain maalmahan ay umuuqdaan inay muujinayaan caksiga.
Si kastaba ha ahaatee, waa wax aad u fudud in lagu qaldo ereyada cimilada iyo cimilada. Waxay leeyihiin xiriir dhow, laakiin isku mid ma aha: halka kan hore loola jeedo qiyamka gaarka ah ee meel cayiman, kan labaadna waxaa loola jeedaa isla xogtan laakiin muddada dheer.
Iyadoo tan lagu xisaabtamayo, hirarka qabow iyo kuleylka, daadadka, duufaannada iyo ifafaaleyaasha kale ee ka dhasha jawiga waa dhacdooyin gaar ah oo isbeddelka cimilada uusan ka hortegin laakiin wax ka beddelo. Sida uu u sharraxay khabiirka saadaasha hawada ee AEMET Ernesto Rodríguez Camino bogga Gubasho, »Markaan isbeddelo ku yeelanno cimilada, u kuurgelno lana saadaalino mustaqbalka, waxyaabaha la arko waxaa ka mid ah in ifafaalaha daran uu isbeddelo. Waad beddeli kartaa xoogga, inta jeer ee phen ifafaalaha nooca qabow u muuqdaa inuu ka tiro yar yahay kana sii daran yahay. Laakiin taasi micnaheedu maahan in la cabudhiyay iyo in marka qofku muuqdo, isbeddelka cimilada su’aal la galiyo.
In kasta oo xaqiiqda ah in mawjaddan qabow ee aan la kulmaynaa ay umuuqato dhacdo aan caadi ahayn, maahan markii ugu horreysay ee ay dhacdo mana noqon doonto tii ugu dambeysay. Taariikhdeena ugu dambeysay, waxaan ku muujineynaa mowjadaha soo socda ee ugu qabow Spain:
Laga bilaabo Diseembar 13 illaa 29, 2001: muddo 17 maalmood ah, heerkulka ugu yar wuxuu ahaa -15ºC wuxuuna saameeyay 32 gobol.
Laga bilaabo Febraayo 8 ilaa 15, 2012: oo soconaya 7 maalmood, heerkulka ugu yar ee la diiwaan geliyey wuxuu ahaa -20ºC. Waxay saamaysay 30 gobol.
Dhacdooyinkan heerkulka hooseeya iyo barafka dhacaya waa mid ka mid ah waxyaabaha sida ugu wanaagsan loo saadaalin karo, si dadka loogu wargaliyo goor hore si ay u qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah sidaas darteedna looga fogaado dhibaatooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Mowjadaha qabow ma xiriir la leeyihiin isbeddelka cimilada?